Bangladesh: Voasakana Ny YouTube Sy Ireo Tranonkala Fizarana Rakitra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 23 Febroary 2018 3:18 GMT
Vakio amin'ny teny Português, Español, বাংলা, English
Tsy afaka niditra tamin'ny YouTube ireo mpampiasa aterineto ao Bangladesh nanomboka Zoma (6 Martsa 2009) hariva. Vetivety dia hitan'ny olona fa tsy afaka nidirana koa ny tambajotra sosialy hafa ary ny tranonkala fampiantranoana/fizaràna tahàka ny Esnips, mediafire sns. Toy ny hoe sakanan'ny rindrinafo ao amin'ny IIG (Vavahady iraisampirenn'ny aterineto) izy ireo satria afaka idirana amin'ny alàlan'ny proxy.
Miantso ny governemanta ao Blangladesh ny Torpon mba tsy hanaisotra ny fahalalahan'ny aterineto rehefa avy nitatitra porofo vitsivitsy momba ilay fanasivanana.
Rehefa nalefa avy ao amin'ny lohamilin'ny vondronan'ny mpampiasa Linux ao Bangladesh ny baiko “traceroute” nikendrena ny Google, YouTube ary ny tranonkala E-snips, nasehon'ny vokatr'izany fa afaka tratrarina ny lohamilina Google fa miraikitra ao amin'ny rindrinafon'ny BTTB ny roa hafa.
IIGS (Vavahady iraisampirenan'ny aterineto) ofisialy ao Bangladesh ny Mango sy BTCL (BTTB teo aloha). Nanomboka ny Aprily 2009 teo ireo mpanome tolotra aterineto, noho ny fameperana, tsy maintsy mandefa ny fifamoivoizany iraisampirenena any amin'ny Mango, na BTCL, izay mandefa ny fifamoivoizana amin'ny alàlan'ny tariby ambany ranomasina na ny vsats.Voamarin‘ny Gazety Bangla Prothom Alo ny fandraràna ny Youtube. Nitatitra momba ny fanivànana tranonkala hafa maromaro ny mpampiaza Twitter Mahay Alam Khan:
mahayalamkhan: Voaràra na voasakana ao Bangladesh ny youtube, eSnips, midiafire, filefreak, upload-mp3. Avereno bitsihana azafady.
Nanombatombana momba ny antony nanaovana ny fandraràna i Russell John:
Taorian'ny fikomian'ny BDR sy ny fandripahana ny miaramila manamboninahitra tao Dhaka, nihaona tamin'ireo miaramila manamboninahitra niharan'ny fitondrantena ratsy ny Praiminisitra tao anaty trano mihidy ao Shenakunja izay tsy misy mpanao gazety na olona avy any ivelany afaka nanatrika. Nitete ireo rakipeo sy ny resaka tao amin'ilay fihaonana, nakarina ary nozaraina tamin'ny alalan'ireo tranonkala marobe fizarana rakitra, tao anatiny ny E-snips sy YouTube. Niresaka momba ny olan'ilay rakipeo tafaporitsaka ny bilaogy Unheard Voice izay nampiasain'ny sehatra sasany hamoronana fifamaliana pôlitika ary hanaratsiana ny miaramila sy ny Praiminisitra.
Hoy i “Dark ocean needs a lighthouse” (Mila jiro mpitari-dàlana ny ranomasimbe maizina)
Manome rohy proxy ny bilaogera sasany toa an’ i Kayes Mahud mba hahafahan'ny hafa miditra amin'ireo votoaty voasakana. Tsindrian'i i Razon Sun fa efa nivoaka tao anaty gazety tao an-toerana [bn] ny votoatin'ny fihaonana tao Shenakunjo. Araka izany, tena tsy misy lojika ny fibahanana ny aterineto. Mety voateny eto fa afaka miditra mora foana amin'ireny votoaty ireny ny Bangladeshis any ivelan'ny Bangladesh, izay afaka alaina dia zaraina amin'ny imailaka avy eo.
Hoy i Sushanta:
Mamoaka ny fahasorenany i Russell: